ပို့စ်တင်ချိန် - 2/06/2014 12:59:00 PM
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတွေမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အခြေခံအသိအမြင်ဗဟုသုတတွေ အသီးသီးရှိနှင့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်... ဒါပေမဲ့ ရှေးလူကြီးတွေရဲ့ သဒ္ဓါလွန်ကဲမှုကြောင့် တစ်ချို့အချက်အလက်များဟာ သဘာဝလွန် အဖြစ်အပျက် တော်တော်ဆန်နေပါတယ်... တခြားဘာသာများက ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားများရဲ့ စွမ်းရည်ကို လိုက်လံတုပရင်း ဒီလိုဖြစ်လာသလားတော့ မဆိုနိုင်ပါဘူး...
ကိုယ်တိုင်သိမြင်ခံစား နားလည်နိုင်မှ လက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့ အခုလို ခေတ်ကြီးမှာ ဘာသာခြားတွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာ အကြောင်း ပြောပြတိုင်း ထောက်ပြစရာတွေအများကြီးရှိနေခဲ့ပါတယ်... အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓဝင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များဖြစ်ပါတယ်... ဒီအကြောင်းအရာတွေဟာ မှန်ကောင်းမှန်ပါလိမ့်မယ်... တကယ်ဖြစ်ခဲ့ကောင်း ဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်... ဒါပေမဲ့ မျက်မြင်ဒိဌ မမြင်တွေ့နိုင်တဲ့ အခါမှတော့ ယုံကြည်ဖို့ ခက်ခဲကြပါတယ်...
ဗုဒ္ဓဘုရားအပေါ် ယုံကြည်လေးစားမှုလွန်ကဲလာတာနဲ့အမျှ လောကမှာ အသာလွန်ဆုံး အမြင့်မြတ်ဆုံးဆိုတဲ့ ပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်လာအောင် အမျိုးမျိုး အမွှမ်းတင်ခဲ့ဟန်တူပါတယ်... တကယ့်တကယ်တော့ အဲ့ဒီသဘာဝလွန်အရာတွေကို ထည့်မစဉ်းစားခဲ့ရင်တောင် ဗုဒ္ဓဘုရားဟာ လောကကြီးမှာ အသာလွန် အမြင့်မြတ်ဆုံး မဟာလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ထင်ရှားစေတဲ့အချက်တွေ အများကြီးရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်...
ဒီလိုအမြင်မျိုးနဲ့ ချဉ်းကပ်ရေးသားခဲ့တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကတော့ အရှင် Shravasti Dhammika ဆိုတဲ့ ဆရာတော်ရေးသားခဲ့တဲ့ Good Question Good Answer ဆိုတဲ့ စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်... ဒီဆရာတော်ဟာ သြစတြေးလျက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ အာရှတိုက်ကဘာသာတရားတွေအကြောင်းကို သြစေတြးလျနဲ့ အာရှတိုက်တစ်ခွင်က တက္ကသိုလ်တွေ၊ ရုပ်မြင်သံကြားတွေနဲ့ ရေဒီယိုတွေမှာ ဟောပြောပို့ချခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်...
သူဟာ သြစတြေးလျနိုင်ငံသား ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီး အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်... ၁၉၇၃ မှာ ထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားရောက်ပြီး ရဟန်းဝတ်ခဲ့ပါတယ်... အဲ့ဒီနောက် လာအို၊ မြန်မာ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့သွားရောက်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်... ၁၉၇၆ မှာ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကို သွားရောက်ပြီး ပါဠိဘာသာကို သင်ယူလေ့လာခဲ့ပါတယ်... နောက်ပိုင်း မှာတော့ သီရိလင်္ကာနဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံတို့မှာ သီတင်းသုံးနေထိုင်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်...
Good Question Good Answer ဆိုတဲ့ စာအုပ်ဟာ ဆရာတော်ရေးသားခဲ့သမျှထဲမှာ အထင်ရှားဆုံးစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်... ဒီစာအုပ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူအများမေးမြန်းကြတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဆရာတော်က ပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားထားပါတယ်... ဒီစာအုပ်ကို ၁၉၈၇ ခုနှစ်က စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြီး အကြိမ်ကြိမ်ပြန်လည် ရိုက်နှိပ်ခဲ့ရပါတယ်... ဘာသာပေါင်း ၃၁ ဘာသာ ကိုလည်း ပြန်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်... ဒီစာအုပ်ကို ပြန်လည်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေလိုသူတွေ အတွက်လည်း ဓမ္မဒါနအဖြစ် ထုတ်ဝေခွင့်ပြုပေးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်...
အခု ဒီစာအုပ်ထဲက ဖတ်ရတာလေးနဲ့ ရလာတဲ့ အတွေးအမြင်လေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေတင်ပြသွားပါ့မယ်... မိမိတို့ ယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့ အသိအမြင်များနဲ့ ကွာဟနေရင်လည်း ကြိုက်နှစ်သက်သလို လက်ခံယူဆနိုင်ပါတယ်... စာရေးသူဖက်ကလည်း မိကျောင်းမင်း ရေကင်းပြတာမျိုးမဖြစ်အောင် သတိထားသွားပါ့မယ်...
တစ်ခါက လူကြီးတစ်ယောက်ကို တွေ့ဖူးပါတယ်... သူက ထိုင်းနိုင်ငံက ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါး ဟောကြားတဲ့တရားဆိုပြီး သူအမြဲနာယူမှတ်သားကြောင်း အမွှမ်းတင်ပြောဆိုပါတယ်... သူပြောတာက
"Do good things. Avoid bad things. Be your mind Clean." ဆိုသလိုမျိုးပါပဲ... အတိအကျတော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး... ကျွန်တော်တို့ ငယ်စဉ်ကတည်းက ရွတ်ဆိုခဲ့တဲ့ "မကောင်းမှုရှောင်၊ ကောင်းမှုဆောင်၊ ဖြူအောင်စိတ်ကိုထား" ဆိုတာကို မကြားဖူးခဲ့လေသလားတော့မသိပါဘူး.... နိုင်ငံရပ်ခြားက တရားဆိုပြီး အထင်ကြီးနေဟန်တူပါတယ်...
အခုရေးတဲ့အခါမှာလည်း အဲ့ဒီလိုသဘောမရှိကြောင်း ဦးစွာ ပြောလိုပါတယ်... မြန်မာပြည်မှာက ရဟန်းပညာရှိ လူပညာရှိတွေ များပါတယ်... များသလို လေ့လာဆည်းပူးစရာ ဗဟုသုတ၊ ဆုံးမစကားတွေလည်း အများအပြားပါပဲ... ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့အကြောင်းအရာတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ အရိုးစွဲနေခဲ့တဲ့ အသိအမြင်အယူအဆယုံကြည်လက်ခံမှုတွေထဲက မလွတ်ကင်းနိုင်သေးပါဘူး... အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတစ်ချို့ကလည်း တခြားသူတွေ အထူးသဖြင့် ဘာသာခြားတွေ အမြင်မှာ အားနည်းချက်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတတ်တာမျိုး သတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်...
ဒါကြောင့် ဒီစာအုပ်လေးကိုဖတ်ရင်းတွေးမိလာတဲ့ အတွေးအမြင်လေးတွေကို အချိန်ရရင် ရသလို ပြန်လည်မျှဝေသွားပါ့မယ်... စာရေးသူက ဘာသာရေးသမားမဟုတ်တဲ့အတွက် အသုံးအနှုန်း၊ အယူအဆတစ်ချို့ မှားကောင်းမှားနေပါလိမ့်မယ်... စာဖတ်သူတွေနဲ့ အတွေးအမြင်လေးတွေဖလှယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့လိုအမှားမျိုးတွေ့ရင်လည်း ပြင်ဆင်တည့်မတ်ပေးသွားကြဖို့ ပန်ကြားလိုပါတယ်... ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက် အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲ အပြင်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုအပေါ် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့ သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်....
၁) ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ဘာလဲ
ဗုဒ္ဓဘာသာ (Buddhism) ဟာ နိုးထစေခြင်း (to wake up) လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ ဗောဓိ (Budhi) ဆိုတဲ့စကားလုံးကနေ ဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်... ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ နိုးထခြင်းဆိုင်ရာဒဿနအမြင် (Philosophy of Awakening) လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်... ဒီဒဿနဗေဒ ဒါမှမဟုတ် ဒဿနအမြင်ဟာ ဗုဒ္ဓ (Buddha) လို့ထင်ရှားတဲ့ သိဒ္ဓတ္ထဂေါတမ (Siddhata Gotama) ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ဆီကနေ ပြန့်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်... သူဟာ အသက် ၃၆ နှစ်အရွယ်မှာ အသိဥာဏ်တွေ ပွင့်လင်းနိုးထခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်... ဒီကနေ့ ကမ္ဘာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပေါင်း သန်း ၃၀၀ လောက် ရှိနေပါတယ်...